Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Onye isi ọhụụ ọhụrụ ga -eduga na TPDCo
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Onye isi ọhụụ ọhụrụ TPDCo nwa oge Georgeia Robinson
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, gbara izu taa na odeakwụkwọ na -ahụ maka ụlọ ọrụ, Jennifer Griffith, na Board of Directors of the Tourism Product Development Company (TPDCo).
Kọmitii ahụ họpụtara Georgeia Robinson onye bụ onye isi ugbu a na -ahụ maka ọrụ ụlọ ọrụ ka ọ banye n'ọkwa onye isi nchịkwa nwa oge.
Maazị Lionel Myrie, onye isi ugbu a maka Mmepe Ngwaahịa na Njem Nleta Obodo, agaghị ewere ọnọdụ nwa oge.
Ndebanye maka onye isi nchịkwa na -adịgide adịgide ga -emecha n'ọnwa a.
N'ịgbaso ndụmọdụ ahụ, ndị Kọmitii ahụ ahọpụtala Georgeia Robinson, onye isi ụlọ ọrụ TPDCo, Onye isi oche onye ọrụ nwa oge ruo mgbe a ga -emecha nwụnye onye isi nchịkwa ọhụrụ n'ọnwa a.
Maazị Lionel Myrie, onye isi mmepe ngwaahịa na njem nlegharị anya obodo, agaghị ewere ọkwa nke onye isi nchịkwa nwa oge.
The Companylọ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya (TPDCo) bụ ụlọ ọrụ etiti gọọmentị Gọọmentị nyere iwu ka ọ kwado mmezi, mmepe na nkwalite ngwaahịa njem. TPDCo na -arụ ọrụ kemgbe Eprel 5, 1996, edebara aha ya dị ka ụlọ ọrụ nkeonwe n'okpuru ikike nke Ministry of Tourism. Otu ndị isi oche na -ahụ maka atumatu ụlọ ọrụ na atụmatụ atụmatụ. Onye isi nchịkwa na -akọrọ Onye isi oche nke Board ma nwee mmekọrịta na -arụ ọrụ na Minista njem nlegharị anya na odeakwụkwọ na -adịgide adịgide na Jamaica Ozi nke njem.
Ezubere ụlọ ọrụ a iji kwado gọọmentị na ụlọ ọrụ gọọmentị dị iche iche na mmepe nke ụlọ ọrụ njem, ọkachasị site na ịhazi na ime ka ngwa ngwa mee n'etiti ọdịmma ọha na nke onwe.
Edepụtara ndị otu TPDCo na ngalaba ọha na nkeonwe yana ndị nnọchi anya Jamaica Hotel & Tourist Association (JHTA), Jamaica Association of Villas and Apartments (JAVA) na mpaghara ezumike ọ bụla. Gọọmentị na -ahọpụta onye isi oche TPDCo.
Iji mee ka mgbanwe dị iche iche, mmepe na nkwalite ngwaahịa njem ahụ na-eji ndị ọrụ nwere ahụmịhe na ndị ruru eru iji welie ahụmịhe ndị ọbịa site na iwulite nkwekọrịta na njikọ aka dị iche iche na ndị nwere ụlọ ọrụ iji wee nwee uto akụ na ụba na akụ na ụba. Companylọ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya (TPDCo) bụ ụlọ ọrụ etiti gọọmentị Jamaica nyere iwu ka ọ kwado mmezi, mmepe na nkwalite ngwaahịa njem.
TPDCo, ụlọ ọrụ mmepe ngwaahịa klaasị ụwa na -enye aka na ngwaahịa njem nlegharị anya na ahụmịhe onye ọbịa, na -ebute ndụ ndị Jamaica niile ka mma.